Aqalada Kirada gudaha Woodbridge, Suffolk
Real Estate Listings: Residential homes Cottages Suffolk Woodbridge
Aqalada gudaha Woodbridge
Aqalada gudaha Suffolk
1 - 2 ee 2 Liisaska
2 Bed Cottage To Rent In Woodbridge, Suffolk
Rose Hill Cottage is a period cottage adjoining Rose Hill House tucked away down a private driveway leading off Church Street close to Market Hill, and a short stroll from the village centre, Orford Quay, the river and Orford Castle.Other village amenities include local shops, The Pump Street Bakery...
Woodbridge in Suffolk, Ip12 2ll
Waxa daabacay Castle Estates
arag Aqalada la daabacay 2 weeks ago
Leaders Woodbridge are pleased to offer this stunning Cottage. It has been renovated and equipped to the highest standard of comfort and convenience.Parget Cottage is situated overlooking the Marlesford Conservation Area. The cottage elevation faces into an enclosed garden with water meadows adjacen...
Woodbridge in Suffolk, Ip13 0ah
Waxa daabacay Leaders - Woodbridge
arag Aqalada la daabacay 2 months ago
Cottages For Rent in Woodbridge, Suffolk
Guri yar ayaa ah, caadi ahaan, aqal yar. Waxay qaadan kartaa macnaha ahaanshaha dhisme duug ah ama duug ah. Isticmaalka casriga ah, guryaha aqalada badanaa waa guri dhexdhexaad ah, badanaaba deggan, khaasatan miyiga ama qeybta miyiga. Ereygu wuxuu ka yimid qaab dhismeedka Ingriiska, halkaas oo asal ahaan loo tixraaco guri leh dhul dabaq ah oo dabaq ah iyo dabaq sare oo ka kooban hal qol ama wax kabadan oo ku habboon dabaqa hoostiisa. Ingiriisiga Ingiriisiga ereygu hadda wuxuu u taagan yahay guri yar oo dhisme dhaqameed ah, in kasta oo loo adeegsan karo dhismaha casriga ah ee loogu talagalay inuu u ekaado guryaha dhaqameed ("aqallo yaryar"). Guryaha yar yar waa la goyn karaa, ama waa loo duleyn karaa, sida kuwa loo dhisay shaqaalaha guryaha guryaha ku yaal ee tuulooyinka macdanta laga qodo. Guryaha iskuxiran ee la siiyay shaqaalaha beeruhu badanaa waxay ahaayeen aqal, fiiri jardiinada aqalada. Beeralleyda beeralleyda waxaa mar loo yaqaannay tuubbooyin. Guryaha fasaxa ee fasaxa ayaa ku jira dhaqamo badan oo magacyo kala duwan leh. Ingiriisiga Mareykanka ah, "aqal" waa hal xilli oo loogu talagalay guryaha fasaxa noocaas ah, in kasta oo laga yaabo in sidoo kale loogu yeero "kabin", "chalet", ama xitaa "xero". Wadamada qaarkood (tusaale ahaan Scandinavia, Baltic, iyo Russia) Ereyga "aqal" waxaa laga helaa ereyo maxalli ah: Afka finnishka mökki, Estonian suvila, masraxa iswiidhishka, afka noorwiijiga (laga soo bilaabo erayga Jarmalka Hütte), gudaha Slovak chalupa, ruushka дача (dacha, oo tilmaami kara guri fasax / xagaaga, oo badanaa ku yaal meel biyo u dhow). Waxaa jira guryo ku-habboon guryaha guryaha ah oo ku yaal magaalooyinka Mareykanka oo markii ugu horreysay loo dhisay ujeeddada addoonsiga guryaha Meelaha ay ka mid yihiin Kanada, "aqal" ma xambaaraan macno cabbir oo cabir ah (marka la barbar dhigo vicarage ama hermitage)